အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ခွောကျခွားစရာ အကောငျးဆုံး လမျးမကွီး ၅ ခု | Mobile Guide
Home General Knowledge အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ခွောကျခွားစရာ အကောငျးဆုံး လမျးမကွီး ၅ ခု
photo – Treebo
သရဲတစ်ဆတှေေ တကယျရှိတယျဆိုတာ ယုံပါသလား? ဒီမေးခှနျးရဲ့ အဖွကေို အခုထိ ဘယျသူမှ တိတိကကြ ဖွဆေိုနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ ယုံကွညျလကျခံတဲ့သူရှိသလို အမြားစုကတော့ ကိုယျတိုငျမကွုံတှရေ့သရှေ့ လကျခံကွမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒီတဈခါမှာတော့ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ သရဲအခွောကျဆုံး လမျးမကွီး ၅ ခု အကွောငျးကို ပွောပွပေးမှာပါ။
photo – dangerousroad
ဒီလမျးပျေါမှာ ကငျးထောကျလူငယျအုပျစု သဆေုံးခဲ့ကွပါတယျ။ အမှနျတော့ ကငျးထောကျလူငယျလေးတှေ ဒီလမျးမှာ သဆေုံးခဲ့ကွလို့ ဒီနာမညျပေးထားခဲ့တာတော့ မဟုတျပါဘူး။ကငျးထောကျလူငယျလေးတှေ သဆေုံးတဲ့ ဇာတျလမျးက အမြိုးမြိုးကှဲပွားနပေါတယျ။ တခြို့က ဒီလူငယျလေးတှကေို ဘတျဈကားမောငျးသူက သတျဖွတျခဲ့တယျလို့ ပွောကွတဲ့သူတှရှေိသလို တခြို့ကတော့ ကငျးထောကျအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျက သတျဖွတျခဲ့တယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။ နောကျထပျ ဇာတျလမျးတဈခုကွားရပွနျတာက ကငျးထောကျအဖှဲ့ဟာ စခနျးကနထှေကျခှာခဲ့ပွီး စခနျးကို မီးရှို့ပွီး ထှကျခှာသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအဖှဲ့ထဲမှာ လူငယျနှဈဦးသာအသကျရှငျ ကနျြရဈခဲ့ပွီး၊ တောထဲမှာပငျ အစာရစောပွတျလတျပွီး သဆေုံးခဲ့ရတာဖွဈတယျလို့ ဆိုပွနျပါတယျ။ ကငျးထောကျလူငယျလေးတှရေဲ့ ဝိညာဉျဟာ အခုအခြိနျထိ မကြှတျမလှတျနိုငျကွသေးဘဲ သူတို့သဆေုံးခဲ့ကွတဲ့ ဒီတောလမျးအတှငျးမှာပဲ ပိတျမိနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေဆိုပါတယျ။ ညရောကျပွီဆိုတာနဲ့ ဒီလမျးလေးမှာ မီးအိမျတှနေဲ့ ပုံဖျောလို့မရနိုငျတဲ့ အရိပျမညျးမညျးကွီးသှားလာလှုပျရှားနတောကို တှကွေ့ရတဲ့အပွငျ သဈပငျတှမှောလညျး လကျရာသေးသေးလေးတှကေို တှကွေ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
photo – scary for kids
နယူးဂြာစီမှာရှိတဲ့ ဒီလမျးလေးမြာ အနျနီ ဆိုတဲ့ မိနျးကလေးတဈဦး ရကျရကျစကျစကျသတျဖွတျခံခဲ့ရပွီးတဲ့နောကျ ဒီလမျးမကွီးဟာ ခွောကျခွားစရာကောငျးတဲ့နရောဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။အနျနှဈဟာ ၁၉၆၀ ခုနှဈဝနျးကငျြမှာ ဒီဒသေမှာ နထေိုငျခဲ့ပွီး သူမရဲ့ကြောငျးဆငျးပှဲကအပွနျ ညမှာ ဒီလမျးမကွီးကနေ တဈဦးတညျးလမျးလြှောကျပွနျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ အရကျမူးနတေဲ့ အမြိုးသားတှပေါဝငျတဲ့ ကားတဈစီးဟာ သူမအနားကို ခဉျြးကပျလာပွီး ကားထဲဆှဲသှငျးပွီး အဓမ်မပွုကငျြ့ကာ ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျခဲ့ကွပွီး လမျးမပျေါမှာ ပဈထားခဲ့ကွပါတယျ။ အနျနီသဆေုံးတဲ့ နှဈပတျလညျနရေ့ောကျတိုငျး ဒီလမျးမကွီးပျေါမှာ မတျောတဆမှုတဈခုမဟုတျ တဈခုဖွဈပကျြပွီး သဆေုံးမှုတှေ အခုထိဖွဈပျေါနဆေဲပါ။ ညသနျးခေါငျမှာ ဖွတျသနျးသှားလာတဲ့ ကားတခြို့ဟာလညျး လမျးမပျေါမှာ မိနျးကလေးတဈယောကျ လမျးလြှောကျနတောကို တှရေ့တတျလို့ဆိုပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံက ထရပျကားသမား တျောတျောမြားမြားက Route 2A လမျးကို ခွောကျခွားစရာ အကောငျးဆုံးလမျးလို့ သိထားကွပါတယျ။ ဆောငျးရာသီမတိုငျမီအခြိနျမှာကိုပဲ နှငျး၊ ရခေဲနဲ့ မွူတှေ အုံ့ဆိုငျးနတေတျတဲ့ ဒီလမျးမကွီးမှာ သရဲ အငျမတနျခွောကျတယျဆိုတော့ တှေးမိရုံနဲ့တငျ ကွကျသီးထစရာပါ။ ကားသမားတှကေတော့ မိနျးကလေးငယျငယျလေးတဈယောကျကို ဒီလမျးမကွီးပျေါမှာ တခါတရံ တှရေ့တတျပွီး၊ တခါတလကေတြော့ မိနျးမကွီးတဈယောကျက သူ့ယောကျြားအန်တရာယျဖွဈနပေါတယျဆိုပွီး အျောဟဈ အကူအညီ တောငျးနတေတျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ကားရပျပွီး အကူအညီပေးဖို့ ဆငျးသှားလိုကျတာနဲ့ အဲဒီမိနျးမကွီးက ပြောကျပြောကျသှားတတျပါတယျတဲ့။ ကဲ…အဲဒီလမျးမကွီးကို သှားမကွညျ့ခငျြကွဘူးလား…
photo – antique archaeology
ဒီလမျးက Massachusetts မွို့လေးမှာရှိပါတယျ။ ဒီလမျးက မကွောကျတတျတဲ့သူအဖို့ ဆိုရငျတော့ ရယျစရာတောငျ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ဒီသရဲက အန်တရာယျတော့ မပွုပါဘူး။ Route 44 လမျးဘေးမှာ ဖလနျထညျအနှေးထညျနဲ့ ဂငျြးဘောငျးဘီဝတျဆငျထားပွီး အနီရောငျဆံပငျတှပေိုငျဆိုငျထားတဲ့ အမြိုးသားကွီးဟာ လမျးပျေါဖွတျသနျး သှားလာတဲ့ကားသမြှကို သူ့သှားကွီးတှပေျေါအောငျ ရယျပွတတျပါတယျ။ တဈခါတလေ ကားကွုံလိုကျစီးတတျပွီး နောကျခနျးမှာ ထိုငျနရေငျးနဲ့ တဖွညျးဖွညျး ပြောကျကှယျသှားတတျပါတယျလို့ ကားသမားတှကေ ပွနျပွောခဲ့တာပါ။
photo – business insider singapore
ဒသေခံတျောတျောမြားမြားကတော့ Kelly Road လမျးမကွီးကို “ထူးခွား လြှို့ဝှကျမှုတှနေဲ့ပွညျနတေဲ့လမျး” လို့ ချေါဆိုကွပါတယျ။ အဲဒီလိုချေါရတာကလညျး ရာဇဝငျကွီးကွီးမားမားရှိခဲ့လို့ပါ။ဒီလမျးမကွီးပျေါမှာ စုံတှဲတဈတှဲ ဆိုးရှားတဲ့ အဖွဈအပကျြဆိုးကွီးနဲ့ သဆေုံးခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ ညဖကျဖွတျသနျးသှားလာတဲ့ ကားတခြို့ဟာ အျောဟဈငိုယိုပွီး အကူအညီတောငျးနတေဲ့ အသံတှေ ကွားရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ စုံတှဲဟာ Kelly လမျးမကွီးပျေါမှာ ကားမောငျးနှငျနတေဲ့အခြိနျမှာ ယာဉျမတျောတဆမှုဖွဈခဲ့ပွီး ကားမှာခြိတျပါလာတဲ့ ယာဉျနောကျက ခုံဟာ သူတို့အတှဲပျေါကို အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ ပွုတျကခြဲ့တာပါ။ ကောငျမလေးကတော့ လညျပငျးထကျပိုငျးပွတျကာ ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးခဲ့ပွီး၊ ကောငျလေးကတော့ မိနဈအနညျးငယျကွာပွီးနောကျမှ သဆေုံးသှားခဲ့တာပါ။
ကဲ…ဒီခွောကျခွားစရာ ကောငျးတဲ့ လမျးတှပေျေါကို သှားကွညျ့ကွမလား?
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ခြောက်ခြားစရာ အကောင်းဆုံး လမ်းမကြီး ၅ ခု
သရဲတစ္ဆေတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံပါသလား? ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို အခုထိ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရှိသလို အများစုကတော့ ကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့ရသရွေ့ လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သရဲအခြောက်ဆုံး လမ်းမကြီး ၅ ခု အကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာပါ။
ဒီလမ်းပေါ်မှာ ကင်းထောက်လူငယ်အုပ်စု သေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်တော့ ကင်းထောက်လူငယ်လေးတွေ ဒီလမ်းမှာ သေဆုံးခဲ့ကြလို့ ဒီနာမည်ပေးထားခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ကင်းထောက်လူငယ်လေးတွေ သေဆုံးတဲ့ ဇာတ်လမ်းက အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။ တချို့က ဒီလူငယ်လေးတွေကို ဘတ်စ်ကားမောင်းသူက သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြတဲ့သူတွေရှိသလို တချို့ကတော့ ကင်းထောက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကြားရပြန်တာက ကင်းထောက်အဖွဲ့ဟာ စခန်းကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီး စခန်းကို မီးရှို့ပြီး ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာ လူငယ်နှစ်ဦးသာအသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး၊ တောထဲမှာပင် အစာရေစာပြတ်လတ်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ ကင်းထောက်လူငယ်လေးတွေရဲ့ ၀ိညာဉ်ဟာ အခုအချိန်ထိ မကျွတ်မလွတ်နိုင်ကြသေးဘဲ သူတို့သေဆုံးခဲ့ကြတဲ့ ဒီတောလမ်းအတွင်းမှာပဲ ပိတ်မိနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ ညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီလမ်းလေးမှာ မီးအိမ်တွေနဲ့ ပုံဖော်လို့မရနိုင်တဲ့ အရိပ်မည်းမည်းကြီးသွားလာလှုပ်ရှားနေတာကို တွေ့ကြရတဲ့အပြင် သစ်ပင်တွေမှာလည်း လက်ရာသေးသေးလေးတွေကို တွေ့ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နယူးဂျာစီမှာရှိတဲ့ ဒီလမ်းလေးမျာ အန်နီ ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ဒီလမ်းမကြီးဟာ ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အန်နှစ်ဟာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီဒေသမှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ကျောင်းဆင်းပွဲကအပြန် ညမှာ ဒီလမ်းမကြီးကနေ တစ်ဦးတည်းလမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အရက်မူးနေတဲ့ အမျိုးသားတွေပါဝင်တဲ့ ကားတစ်စီးဟာ သူမအနားကို ချဉ်းကပ်လာပြီး ကားထဲဆွဲသွင်းပြီး အဓမ္မပြုကျင့်ကာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး လမ်းမပေါ်မှာ ပစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အန်နီသေဆုံးတဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ရောက်တိုင်း ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ မတော်တဆမှုတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုဖြစ်ပျက်ပြီး သေဆုံးမှုတွေ အခုထိဖြစ်ပေါ်နေဆဲပါ။ ညသန်းခေါင်မှာ ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ ကားတချို့ဟာလည်း လမ်းမပေါ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်နေတာကို တွေ့ရတတ်လို့ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ထရပ်ကားသမား တော်တော်များများက Route 2A လမ်းကို ခြောက်ခြားစရာ အကောင်းဆုံးလမ်းလို့ သိထားကြပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမတိုင်မီအချိန်မှာကိုပဲ နှင်း၊ ရေခဲနဲ့ မြူတွေ အုံ့ဆိုင်းနေတတ်တဲ့ ဒီလမ်းမကြီးမှာ သရဲ အင်မတန်ခြောက်တယ်ဆိုတော့ တွေးမိရုံနဲ့တင် ကြက်သီးထစရာပါ။ ကားသမားတွေကတော့ မိန်းကလေးငယ်ငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ တခါတရံ တွေ့ရတတ်ပြီး၊ တခါတလေကျတော့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်က သူ့ယောက်ျားအန္တရာယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီး အော်ဟစ် အကူအညီ တောင်းနေတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားရပ်ပြီး အကူအညီပေးဖို့ ဆင်းသွားလိုက်တာနဲ့ အဲဒီမိန်းမကြီးက ပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့။ ကဲ…အဲဒီလမ်းမကြီးကို သွားမကြည့်ချင်ကြဘူးလား…
ဒီလမ်းက Massachusetts မြို့လေးမှာရှိပါတယ်။ ဒီလမ်းက မကြောက်တတ်တဲ့သူအဖို့ ဆိုရင်တော့ ရယ်စရာတောင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီသရဲက အန္တရာယ်တော့ မပြုပါဘူး။ Route 44 လမ်းဘေးမှာ ဖလန်ထည်အနွေးထည်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ဆင်ထားပြီး အနီရောင်ဆံပင်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသားကြီးဟာ လမ်းပေါ်ဖြတ်သန်း သွားလာတဲ့ကားသမျှကို သူ့သွားကြီးတွေပေါ်အောင် ရယ်ပြတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကားကြုံလိုက်စီးတတ်ပြီး နောက်ခန်းမှာ ထိုင်နေရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်လို့ ကားသမားတွေက ပြန်ပြောခဲ့တာပါ။
ဒေသခံတော်တော်များများကတော့ Kelly Road လမ်းမကြီးကို “ထူးခြား လျှို့ဝှက်မှုတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့လမ်း” လို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီလိုခေါ်ရတာကလည်း ရာဇ၀င်ကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့လို့ပါ။ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ စုံတွဲတစ်တွဲ ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဆိုးကြီးနဲ့ သေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ညဖက်ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ ကားတချို့ဟာ အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး အကူအညီတောင်းနေတဲ့ အသံတွေ ကြားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စုံတွဲဟာ Kelly လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကားမောင်းနှင်နေတဲ့အချိန်မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ကားမှာချိတ်ပါလာတဲ့ ယာဉ်နောက်က ခုံဟာ သူတို့အတွဲပေါ်ကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပြုတ်ကျခဲ့တာပါ။ ကောင်မလေးကတော့ လည်ပင်းထက်ပိုင်းပြတ်ကာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ကောင်လေးကတော့ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှ သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။
ကဲ…ဒီခြောက်ခြားစရာ ကောင်းတဲ့ လမ်းတွေပေါ်ကို သွားကြည့်ကြမလား?
Next articleလူပေါငျးနှဈရာကြျောအသဆေိုးနဲ့ သခေဲ့ရတဲ့ရှာ